Izany no tena mino fa ny atidohan'ny olombelona dia toa foana vao teraka, ary toy ny zaza dia manomboka mitombo sy mandray handrisika, ny Mason'ny manomboka manao fifandraisana. Siansa izao ny mahita, na izany aza, fa ny mifanohitra mety ho marina. Ny zaza teraka dia marina maro neuron kokoa noho ny ankamaroan'ny olon-dehibe fifandraisana manana. Mety ho ny fianarana no tsy hitranga amin'ny alalan'ny fanaovana neuron fifandraisana, fa amin'ny weeding an'ireo izay tsy ampiasaina. Raha izany no marina, dia isika rehetra, ara-bakiteny, teraka amin'ny mamirapiratra saina ary tsy maintsy mampiasa izany na hahavery azy.
Tamin'ny herinandro voalohany eo amin'ny fiainana, ankamaroan'ny zaza dia babble rehetra javatra tsy azo atao feo. Na izany aza, ireo ankizy dia aoriana very ny fahafahana mamorona feo izay tsy anisan'ny ny teny efa nampiofanina mba hiteny. Ary noho izany, ny tontolo iainana ny zaza, dia mitana toerana lehibe eo amin'ny atidoha anjara asa fampandrosoana.
Rehefa tany am-boalohany endrika angano: Coronal fizarana misy ny chronically imaged pyramidal neuron "Dow" (visualized ny maitso GFP) tsy voalotoko ny bohiny (visualized ny antibody staining in mena). Confocal sary stack, takela ny GFP sy Gaba dia iraika fantsona. Scale bara: 100 μm (sary: Wikipedia)
Ny mpahay siansa milaza fa eo amin'ny fiaraha-monina ny eo ho eo ny olona mampiasa ihany 5 – 10% ny ati-doha ny mety. Sary an-tsaina ny zavatra mety ho ny fiainanao tahaka raha toa ka afaka mandrisika ny -tsaina ho activating na dia ampahany kely maromaro ny izany hery anaty!
Atombohy amin'ny alalan'ny fametrahana ny tenanao:
1. Raha afaka manana na inona na inona mihitsy, inona no mety ho?
2. Inona no tokony hataoko mba ho tonga izany?
3. Inona no mijanona ahy tsy hanao ireo zavatra ireo ankehitriny?
4. Ahoana no ahafahako mandresy ireo olana mba hahazo ny fiainana iriko?
Ireo fanontaniana ireo handrisika antsika ho atỳ ny mamoron ary Eritreritra tsara — ny toetra izay hamela anao mba hanaitra ny hafa 90% sy hitandrina ireo Mason'ny mitifitra!
Ary mety ho marina izany, II efa manana toe-tsaina tsara, na, angamba izay zavatra tsara tsy miasa — Mila rehetra dia tsitrapo Fa ny fampisehoana manaraka dia manaporofo fa ny saina dia mahery lavitra noho ny faniriana ho afaka mandrakizay.
Okay, vonona ho amin'ny fakam-panahy? Vorio avokoa ny hery sy “tsitrapo.” Aoka ho azo antoka TSY mba hanao izao manaraka izao tonga eto tsy mihevitra ny mena firetruck!!
ianao avy hatrany nieritreritra ny mena firetruck, marina? Izany dia satria, raha ny sitrapo sy ny saina dia mifanohitra, ny saina mandresy foana. Ny ankamaroan'ny olona mandany fotoana be dia be ny milaza ny tenany izay tsy te, fa tsy izay ataony te.
Na dia eo aza ny faniriana grama isaky ny afaka herim, dia toa hiafara amin'ny bebe kokoa ny zavatra taloha ihany.
Thats satria ny saina miasa ao amin'ny sary, tsy teny. Saina dia ny zava-miafina ilaina eo amin'ny fiainana. Raha tena manan-karena ny olona sary an-tsaina, na inona na inona ny vola izy ireo, vintana no dia ho salama sy matanjaha, ka hiaina ny fiainana be dia be.
Raha misy manan-karena ny olona mihevitra ny tenany mahantra, na eo amoron'i intsony ny harena, Azo inoana fa ny fahoriana sy ny aretina dia hamely azy ho any am-pasana.
Izay rehetra mitady isika eo amin'ny fiainana dia efa eo ao anatin'ny tenantsika. Ny haingana no tonga mino ny herin'ny tenantsika saina, ny mora kokoa ny fiainantsika dia ho lasa. I fanamby anao mba haninjitra ny sainao ho amin'ny mety hisian'ny nahavita zavatra mihoatra noho ny ankehitriny hetaheta.
Ahoana raha, amin'ny ezaka mba hanatratra ny tanjonao, ianao nifoha ny mahery miseho manam-pahaizana ao? Inona no ho tsapanao raha nahita ny fanafody ho an'ny SIDA na homamiadana? Eritrereto ny olona izay te handray soa avy amin'ny zava-bitany.
Ny zava-misy dia hoe hatramin'ny olona rehetra eto an-tany mihevitra izao tontolo izao ny fahasalamana sy ny aina mamelona ho an'ny rehetra, misy foana ny aretina sy ny loza. Raiso anjara-raharaha ny amin'ny fiainanao ankehitriny. Sary an-tsaina ny fomba fahasalamana sy fahasambarana ary dia ho toy izany.
Nisy tselatra ny hazavana sandoka maniry fahatsiarovana in totozy
fianarana: biolojista manodinkodina totozy atidoha mba hamboly diso fahatsiarovana
84632	67 ati-doha, Fahasalamana, Human atidoha, mamoron, Mind, Neuron, Susumu Tonegawa, nieritreritra
← Ampolony maty nandritra ny fifandonana ao amin'ny Morsi famoriam-bahoaka any Ejipta Misotro Coffee Mety Ahenao Mamono Tena Risk! →